भारतका कुन–कुन भूमिले नेपाललाई बेठित गरेको छ ?
गृहपृष्ठ » समाचार » भारतका कुन–कुन भूमिले नेपाललाई बेठित गरेको छ ?
बिहिबार १३ जेठ, २०७८
काठमाडौ । भारतको चीन, नेपाल, बर्मा (म्यानमार), पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानसँग सिमाना जोडिएको छ । क्षेत्रफलका आधारमा भारत विश्वको सातौं ठूलो देश हो । यहाँ हामी भारतको राज्यहरू बारे विस्तृत रूपमा हेर्नेछौं जसले नेपालसँगको सीमाहरू साझा गर्दछन्।
भारत र नेपालको सीमा विश्वमा अद्वितीय छ किनकि दुबै देशका मानिसहरु यसलाई कुनै पनि बिन्दुबाट पार गर्न सक्दछन्। खुल्ला सीमा छ । भारतसँग नेपालसँग सीमाना साझा गर्ने राज्यहरू उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल र बिहार हो। पाँच वटा विशाल राज्यहरुले नेपाललाई बेठित गरेको छ ।
हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि नेपाल र बेलायती बीच १८१६ को सुगौली सन्धिपछि सिमाना गठन भएको थियो। त्यो बेलासम्म साँध मात्र मानिदै आइएको थियो ।
त्यही बेला कपटपूर्वक तरिकाले नेपालको ठूलो भूमि हडपिएको छ । १५ अगस्ट १९४७ मा ब्रिटिश राजबाट भारत स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि भारत आफ्नो वर्तमान रूपमा फर्कियो । शान्ति र मित्रताको सन्धि सन् १९५० मा भारत र नेपालबीच मित्रता कायम भएको छ । तर सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन ।
सङ्ग्रहालयबाट श्रीपेच चोर्न खोज्ने खिमबहादुर घर्ती को हुन् ?
चोरी गरेको आरोपमा नयाँबानेश्वरबाट १२ जना पक्राउ
साताको अन्तिम दिन आज कति छ सुनको मुल्य ?
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वकै १० उत्कृष्ट सहरभित्र पर्यो
लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियामा रोजगारी खुल्यो